IDOLOGOLO YENKOLO - ITOF RELAY
Ngokusho kukaKhadinali Kutwa, ukhetho luka-Alassane Ouattara "aludingi"
UMbhishobhi Omkhulu wase-Abidjan uzwakalise ukukhathazeka ngoLwesibili ngokwanda kwezinxushunxushu njengoba sekusondele ukhetho lukamengameli. UMbhishobhi uJean-Pierre Kutwa ukholelwa ekutheni uMengameli ophumayo, ozobanga ihlandla lesithathu, kumele angaphinde asukume. Cha…
Ulwazi ngoNkulunkulu, luyimfuneko!
Ingabe uNkulunkulu ukhona? Nazi izimpikiswano eziyisithupha ezilula futhi eziqondile ezithi zibonisa ukholo kuNkulunkulu wamanje noqobo. Ingabe ungomunye walabo bantu ongathanda ukuba nobufakazi bokuthi uNkulunkulu ukhona unomphela? Akunangcindezi. Hhayi…
Ungaluzwa kanjani uthando lukaNkulunkulu?
Tchinde Agasti 20, 2020 0
Ngabe ucabanga ukuthi uNkulunkulu uyasithanda? Kunzima ukukholwa? Usuvele ukhona umuntu osempilweni yakho ozizwa umthanda ngempela? Futhi yini eyenza uzizwe uthandwa ngumuntu? Mhlawumbe u ...
Umfundisi Athoms Mbuma ekupheleni kwenjabulo yakhe ngemuva kokuthola iziqu zenkosi yakhe.
Umfundisi osemncane webandla lasePhiladelphia leGranting Church, u-Athoms Mbuma usekupheleni kwenjabulo yakhe ngemuva kokuthola iziqu zenkosi yakhe. Ejabule kakhulu naye, usezolile futhi uyazethemba. Kukhona ezimbalwa ...
ISonto lihlukaniswe ngumbuzo womshado wabaphristi!
Tchinde Agasti 17, 2020 0
Ngesikhathi sokuvalelwa, sinikezelwe kungashadi, abanye abapristi bavuma umuzwa wokulahlwa wedwa ngenxa yesizungu lapho bezithola belahlekelwe oxhumana nabo, imihlangano nokuvakasha okuyindlela yabo yansuku zonke futhi okuyisisekelo sempilo yabo: ...
Yini i-Eid al-Adha futhi igujwa kanjani?
Tchinde UJul 31, 2020 0
Yaziwa nangokuthi uMkhosi Wokunikela, amaSulumane azowugubha emazweni amaningi ngoJulayi 31. AmaSulumane emhlabeni jikelele aseqalile ukugubha umkhosi waminyaka yonke we-Eid al-Adha - idili lomhlatshelo - okuyinto…
IHajj inqunyelwe: lesi akusona okokuqala
Lo nyaka, ngeke kube okokuqala ukuthi isiko lamaSulumane lizophazamiseka ngokwengxenye noma ngokuphelele. Ubhubhane lwe-coronavirus lucindezele ushintsho olukhulu emhlabeni wonke, lubeka ezinye izigidigidi ezimbili ...
Ngabe uSamuel Kleda, uMbhishobhi Omkhulu waseDouala, uthole ukutholakala komlingo ngokumelene ne-coronavirus?
Tchinde UJul 12, 2020 0
U-Archbishop waseDouala uvuselele ithemba lengxenye yabantu ngokumemezela ukuthi usethole ukwelashwa ngamakhambi obekulapha i-coronavirus. Cishe iziguli ezingamashumi amabili zilinde kancane ...
I-Hajj 2020 kungenzeka ingahlehli sengozini naphezu kobhadane lwe-Covid-19, kodwa kwabaningi…
brylandobe Juni 11, 2020 0
I-Hajj 2020 kungenzeka ingahlehlisi naphezu komqedazwe we-Covid-19, kodwa ngaphansi kwezimo eziningi. Nazi ezinye. ISaudi Arabia ingavumela uhambo lokuya e-Mecca, yize kubhubhane iCovid-19, kodwa ...